Tsvaga zvekuona muOyambre Beach muCantabria | Kufamba Nhau
Oyambre gungwa muCantabria
Susana Garcia | | España, General, Beaches
In the nharaunda yeCantabria tinogona kuwana mahombekombe anoshamisa uye zvakasikwa nharaunda, zvichiita kuti zviome kusarudza imwe yadzo. Oyambre Beach inoonekwa seimwe yeakanaka kwazvo ndosaka tichazotaura nezvayo uye nharaunda yazviri. Iri igungwa riri mutaundi reValdáliga neSan Vicente de la Barquera.
La gungwa rakanaka reOyambre inzvimbo yakanaka chaizvo Ndiine anenge makiromita maviri pakureba ndiko kushanya kwakakosha kana tikagara muSan Vicente de la Barquera, nzvimbo yakanaka kwazvo yevashanyi. Iyo iri mukati meOyambre Natural Park uye nekudaro ine zvakare yakakura kukosha kwezvakatipoteredza.
1 Ungasvika sei kuOyambre beach
3 Oyambre Gungwa
4 Nzvimbo dzepedyo
Ungasvika sei kuOyambre beach
Uyu gungwa riri munzvimbo inowanikwa nyore nyore sezvo iri padyo neSandander. Kana iwe ukasvika muSantander unogona kutora iyo A-7 kuenda Torrelavega uyezve iyo A-8 kuSan Vicente de la Barquera. Patinosvika mune ino maseru isu tinofanirwa kutora mugwagwa weCA-236 uyo unotiendesa takananga kuOyambre Natural Park uye kugungwa rakanaka iri. Kubva kuAsturias tinogona zvakare kutora E-70 mugwagwa uyezve iyo A-8 kuenda kuSan Vicente de la Barquera. Zviri nyore kusvika kune ino maseru kubva kwakasiyana nzvimbo nekuti mugwagwa mukuru unopfuura napo, saka kusvika kumahombekombe kuri nyore.
Iri gungwa riripo mukati mepaki yakanaka yakasikwa. Iyi paki inogoverwa pakati pemaseru akasiyana, Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga uye Val de San Vicente. Iyi nzvimbo yave iri paka yepanyama kubvira 1988. Iyi paki inosanganisira nzvimbo dzinoyerera dzeSan Vicente estuary uye Rabia estuary. Iyo ecosystem iri munzvimbo yemahombekombe uko kwatinogona kuwana matunduru, masango nenzizi dzinemaruva akasarudzika nemhuka. Pano iwe unowana shiri dzakawanda dzemumvura dzinozorora munzvimbo panguva yekutama.
Iri igungwa rine jecha regoridhe rakanaka nemamwe mafungu. Isu tinoziva kuti mahombekombe muCantabria akavhurika uye anomira kuti ave nemafungu, saka ndizvo yakakwana kumitambo yakadai sekusevha kana kufefetera mhepo. Kana iri masevhisi ayo, pane pekupaka mota padyo uye zvinokwanisika kusvika ipapo nekutakura kwevanhu, zvirinani mumwaka. Kune inzvimbo yekudzika musasa uye mukati memwaka iwe unogona zvakare kuwana padyo nemabhawa mabhawa kuti utenge chimwe chinhu kuti utonhorere. Nekuve yakakurumbira uye yakanaka kwazvo pamhenderekedzo, basa rayo riri pakati nepakati. Panyaya yemhuri, zvinogara zvakafanira kungwarira nemafungu nekuti zvichienderana nezuva hazvikurudzirwe kuti vana vageze. Mumwaka kune zvakare basa rehupenyu hwehupenyu. Tinofanira kufunga nezve mireza inoyerera nekuti inotitaurira kana tichigona kugeza kana kuti zvingave zvine njodzi. Uine mureza wakasvibira kushambira kunotenderwa, neyero iwe unofanirwa kutora mamwe matanho uye nemureza mutsvuku zvirinani kusashamba. Kune rimwe divi, zvimwe zvinorambidzwa zvinofanirwa kutariswa, nekuti imbwa hadzibvumirwe pamhenderekedzo, haugone kutamba nemabhora kana mafoshoro kana kukanda marara.
Iri gungwa rakanaka kwazvo asi rinotibvumidzawo kuti tione dzimwe nzvimbo dziri pedyo dzekuona nzvimbo. Kune mamwe mahombekombe ari padyo, senge El Cabo pamhenderekedzo muSan Vicente de la Barquera angangoita makiromita maviri kana Comillas kumahombekombe muComillas angangoita makiromita mana.
Iri guta diki raive yakavambwa muzana ramakore rechisere naAlfonso I uye pano akavaka imba yake, kutenderedza iro guta raizorongwa. Iyi inzvimbo iyo yatinopfuura kana tichienda kuAsturias uye iri zvakare pane inozivikanwa Camino de Santiago, saka ine yakawanda uye yakawanda kushanya. Chimwe chezvinhu chatinogona kuona mutaundi iri yakanaka Puente de la Maza, zambuko rebwe kubva muzana ramakore regumi nesere rakavakwa pabhiriji rekare rehuni. Yaive nemabhegi makumi matatu nemaviri uye kune ngano inoti kana iwe ukaita chishuwo uye ukayambuka bhiriji wakabata mweya wako, chishuwo chinozadzikiswa.
Imwe yenzvimbo dzatinogona kuona mutaundi iri ndiyo Dare reSan Luis, chivakwa cheGothic yehurongwa hweFranciscan. Nzvimbo dzekare yeguta rinotipa mienzaniso mizhinji yezvivakwa zvekare, senge Torre del Proboste, shongwe yezana ramakore rechiXNUMX yakasungirirwa kumadziro ekare. Imwe yemaonero ayo anofadza ndiyo kereke yeSanta María de los Ángeles munzvimbo yepamusoro yeguta. Chechi yakanaka yakavakwa kusvika muzana ramakore rechi XNUMX uye inopa muenzaniso wakanaka weGothic gomo maitiro. Zvakakosha kuona zvese zvemukati nekunze, sezvo zvakaziviswawo saiti yeCultural Interest.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Oyambre gungwa muCantabria
Iwo mashanu akanakisa emisasa muCatalonia
Rural Tourism kuGalicia